သင်ယုံကြည်ရသော Apple ထုတ်ကုန်များကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိုင်ပက်ဒ်သတင်း | | iCloud, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
Apple ၏နှစ်ဆင့်စစ်ဆေးမှုသည်အသုံးပြုသူအားလုံးခွင့်ပြုသင့်သောလုံခြုံရေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ထုတ်ကုန်အသစ်များသာထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်“ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများ” အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုမှခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းမှဒေတာများကိုရယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကပြောင်းလဲသွားပြီ၊ အသစ်ဝယ်လိုက်တယ်၊ ငါတို့ဟောင်းတွေရောင်းလိုက်တယ်။ ဒါကယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာတစ်ခုသည်ဒါမျိုးမဖြစ်တော့တော့ဟုဆိုလိုသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်၎င်းတို့အားအမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်ဤကိရိယာစာရင်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြထားသည်.
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Apple account ကိုဖွင့်ဖို့ပါ https://appleid.apple.com ထို့နောက် "Apple ID ကိုစီမံခြင်း" ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ရောက်မှုဒေတာကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့မည့်ကုဒ်ကိုရိုက်ရမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများတစ်ခုမှ။
ပြီးရင်ငါတို့အကောင့်ထဲကိုဝင်ရပါမယ် ဘယ်ဘက်ရှိ menu တွင်“ Password and Security” option ကိုရွေးချယ်ပြီး“ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း” option ကိုရွေးချယ်ပါ။.
ဤမီနူးသည်သင်၏ iCloud အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စက်ပစ္စည်းအားလုံးပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်၏ပစ္စည်းမဟုတ်တော့သည့်စာရင်းတွင်မပါသင့်သောပစ္စည်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ « Delete »ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်၏အကောင့်သို့ပြောင်းလဲမှုများကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုတော့မရှိတော့ပါ။ အတည်ပြုရန်အတွက်ဆိုင်းငံ့ထားသောကိရိယာများကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည် သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်။ « Verify »ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်၎င်းစက်ထဲသို့ကုဒ်တစ်ခုပို့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်ရိုက်ထည့်ပါက၎င်းသည်သင့်စာရင်းထဲတွင်ပါဝင်သည်။
သင်၌ယုံကြည်ရသောကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍) ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်၌ရှိသည့်ကိရိယာအားလုံးကိုသင်အဝေးမှအမှုဖွင့်လျှင်သင်၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းအာမခံရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဆင်းမ်ကဒ်မိတ္တူပွားတစ်ခုကိုအမြဲတောင်းခံပြီးသင်၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန်ထိုစာကိုလက်ခံရရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » သင်ယုံကြည်ရသော Apple ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ပြုပြင်မလဲ
တရားဝင်အက်ပ်ဖြင့် NBA ရာသီသစ်ကိုလိုက်နာပါ